Izindaba - I-polycarboxylate superplasticizer
IPolycarboxylate superplasticizer yi-thrid yesizukulwane sikakhonkolo superplasticizer ethuthuke isuka kuhlobo lwe-lignosulfonate calcium nohlobo lwe-naphthalene superplasticizer.
I-Polycarboxylate superplasticizer iyi-modify superplasticizer ekhonkolo ecwaningwe yi-technology.it entsha ngumkhiqizo oluhlaza okwezemvelo onenkomba enhle ephelele futhi akukho ukungcola.
I-Polycarboxylate superplasticizer uhlobo lwakamuva lwe-superplasticizer ekhonkolo enamanzi aphezulu okwehlisa isilinganiso kanye nokuqina okungcono kokugcina ukwedlula izinhlobo ezimbili zangaphambili zikakhonkolo.
Ukuhlukaniswa okuyinhloko kwe-polycarboxylate superplasticizer
Ngokuya ngokubonakala komkhiqizo, kunezinhlobo ezimbili ikakhulukazi: uhlobo lwamanzi nohlobo lwe-powder.
ngohlobo lwamanzi, kunokuqukethwe okuqinile okuhlukile, okufana ne-40%, i-45%, i-50% ngisho nokuqukethwe okuqinile okungu-60% kodwa kokuhlangenwe nakho kwethu kokuthengisa, kubonakala sengathi ama-50% wokuqukethwe okuqinile i-polycarboxylate superplasticizer ithandwa kakhulu emhlabeni jikelele. okuqukethwe i-polycarboxylate superplasticizer ukulondolozwa kwezindleko uma kuqhathaniswa ne-40% kanye ne-45% yokuqukethwe okuqinile, ngaphandle kokusebenza kwayo kwezinga lokusebenza kokhonkolo kuncintisana kakhulu.
Eminyakeni yamuva, izimboni eziningi ziqala ukukhiqiza uhlobo lwe-powder lwe-polycarboxylate superplasticizer.ngokweqiniso, uhlobo lwe-powder lulula kakhulu ukulethwa.ngokuya ngomehluko wokusetshenziswa, kunezinhlobo ezisetshenzisiwe zodaka, uhlobo olusetshenzisiwe phansi nohlobo lokukhiqiza ukhonkolo olusetshenzisiwe, njll.
Isici esiyinhloko se-polycarboxylate superplasticizer
ukugcwala kokugcina okuphelele
izinga eliphezulu lokunciphisa amanzi
ukuzivumelanisa nezimo okuhle kakhulu ngazo zonke izinhlobo zikasimende
ukuthola eminye imininingwane, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu